फरक दुनिया Archives - नेपाल आज
फरक दुनिया	फरक दुनिया
वैशाख १ गते मात्र फुल्ने प्रेम र सद्भावको प्रतीककाे चमत्कारी फूल
चैत ३१ । सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होलारु त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ। त्यो फूल हेर्न कौतुहलताका साथ आउने आगन्तुकमा नेपालको मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतबाट आउनेको सङ्ख्या लाखौँमा रहेको छ। इसाको छैटाैँ सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका […]
छुरा देखाएर महिलाले गरिन ट्याक्सी चालक पुरुषको बलात्कार !
तपाईले पुरुषले महिला बलात्कार गरेको कुरा त सुन्नु भएकै होला तर महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गरेको कुरा त कमै सुन्नु भएकै होला तर अमेरिकामा एक महिलाले छुरा देखाएर ट्याक्सी ड्राइभरको बलात्कार गरेकी छन् । प्रहरीका अनुसार अमेरिकाको ओहायोमा एक महिलालाई बलात्कारको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । ती महिलाले छुरा देखाएर एउटा ट्याक्सी चालकको बलात्कार गरेको बताइएको […]
होटलको नयाँ अफर, बसेको एक वर्षभित्र सम्बन्ध बिच्छेद भए सम्पूर्ण खर्च फिर्ता
चैत २० । विवाहित जोडी होटलमा बसेको समयदेखि एक वर्षभित्र सम्बन्ध बिच्छेद भए स्विडेनको एक होटलले सम्पूर्ण खर्च फिर्ता हुने ‘अफर’ ल्याएको छ । स्वीडिस होटल चेनले आफ्नो होटलमा आउने सबै पाहुनाले संगै काम गर्दै खुशियाली जिन्दगी बिताउन् र सम्बन्धमा कुनै त्यस्तो खट्पट् नहोस् भनेर ‘सम्बन्ध ग्यारेण्टि सुविधा’ अन्तर्गत रकम फिर्ता दिने घोषणा गरेको हो […]
अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बढाउने आमाछोरा खोरमा
Posted on: March 29, 2017Posted by: Tirtha Khanal
अमेरिकाको फ्लोरिामा एउटी आमाले आफ्नै छोरासँग अप्रातिक सम्बन्ध बढाएको खुलासा गरेकी छन् । अदालतको सुनवाईमा ती महिलाले छोरासँग सम्बन्ध बढाएको स्वीकार गरेकी हुन् । गत फेब्रुअरीमा आमा छोराबीचको शंकास्पद गतिविधि देखेर छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । उनिहरुलाई हाडनाता करणी मुद्दा चलाइएको छ । अदालतले उनीहरुलाई दुई वर्ष भेट्न नपाउने फैसला समेत सुनाएको छ । […]
यस्तो छ लिपिस्टिकबारे थाहा नभएको तथ्य, पुरुषले पनि लगाउथे लिपिस्टिक
लिपिस्टिक महिलाहरुको प्रिय मानिन्छ । यसको लागि अहिले युवतीहरु मनग्गे पैसा खर्च गर्ने गर्छन् । संसारको सबभन्दा महंगो ‘गुएरलैन्स किसकिस गोल्ड’ नाम गरेको लिपिस्टिकको नेपाली मूल्य करिब ६२ लाख रुपैँया छ । यसमा ११० ग्राम सुन र १९९ वटा हिरा राखेर बनाइएको छ । अध्ययनअनुसार संसारका करिब ७० प्रतिशत महिला लिपिस्टिक नलगाइ कुनै कार्यक्रममा सहभागी […]
भैसीले जन्मायो मान्छेको बच्चा !
Posted on: March 26, 2017Posted by: Tirtha Khanal
थाइल्याण्डमा एउटा भैँसीले मान्छे जस्तै जिउडाल भएको पाडो जन्माएको छ । मान्छेजस्तै जिउडाल, ढाँचा तथा स्वरुप भएको बच्चा भैँसीले जन्माउँदा मानिसहरु अचम्ममा नपर्ने कुरा भएन । टाढा टाढाबाट मान्छेहरु त्यो विचित्र हेर्न आए । भैँसीले बच्चा जन्माएको केही बेरमै उक्त मानव स्वरुप पाडोको मृत्यु भएको थियो । तर मानिसहरुमा उक्त पाडो हेर्ने उत्सुकता मेटिएन । […]
५५ फिटको कपाल !
लामो कपाल नारीको सौन्र्दयको पहिचान हो । कपालकै कारण अधिकांश नारीको सौन्दर्यमा निखारता आउँछ । तर, फ्लोरिडाकी आसा मन्डेलालाई भने यही कपाल बोझ भएको छ । नहोस् पनि कसरी उनको कपालको लम्बाइ नै ५५ फिट छ भने तौल २० किलो छ । उनलाई नुहाउनकै लागि ६ बोतल स्याम्पु लाग्छ । कपाल सुकाउनै तीन दिन लाग्छ […]
प्लास्टिक सर्जरीको कमाल
चैत १२ । थाइल्याण्डकी यी युवतीको अब खुशीको दिन सुरु भएका छन् । नि: शुल्क प्लास्टीक सर्जरीको माैका पाएर सुन्दर मुहार पाएकीले उनको खुशीको दिन सुरु भएको हो । उमेरले १९ वर्ष लागेकी थाइल्याण्डकी वीजिटप्रफोर्न आफ्नो बिग्रिएको अनुहारको बनावटको कारण दुः खी थिइन् । उनको बाहिर निस्किेको दाह्रा र भित्र छिरेको चिउडोले अनुहारको बनावटलाई बिगारेको […]
Posted on: March 25, 2017March 25, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत १२ । थाइल्याण्डकी यी युवतीको अब खुशीको दिन सुरु भएका छन् । नि: शुल्क प्लास्टीक सर्जरीको माौका पएर सुन्दर मुहार पाएकीले उनको खुशीको दिन सुरु भएको हो । उमेरले १९ वर्ष लागेकी थाइल्याण्डकी वीजिटप्रफोर्न आफ्नो बिग्रिएको अनुहारको बनावटको कारण दुः खी थिइन् । उनको बाहिर निस्किेको दाह्रा र भित्र छिरेको चिउडोले अनुहारको बनावटलाई बिगारेको […]
बलात्कृत महिला नचिच्याएकाले बलात्कार सावित नहुने अदालतको फैसला !
Posted on: March 25, 2017March 26, 2017Posted by: Bishow Rimal
इटलीमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा एक आश्चर्यजनक फैसला सुनाइएको छ । इटलीको एक अदालतले पीडित महिलाले गुहार मागेर नचिच्याएकाले बलात्कार सावित नहुने भन्दै आरोपीलाई सफाई दिएको छ । यद्यपी उक्त फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै इटलीका न्यायमन्त्री आन्द्रे ओर्लादोले उक्त फैसलामाथि नै छानविन गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । इटालियन समाचार एजेन्सी एन्साको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘तुरिनमा […]
धोकेबाज प्रेमीलाई भुल्न यसो गरिन प्रेमिकाले
आफुले प्रेम गरेको मानिसले धोका दिँदा कसको मन छिया छिया नहोला ? कतिले धोका दिनेको अनुहार कहिल्यै हेर्नु नपरोस् भनेर डेरा नै सर्छन् पनि । अनि कतिपयले बोली बार्छन् । अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा बस्ने २६ बर्षकी हिदी रुहोनेनले आफ्नो धोकेबाज प्रेमीलाई देखाइदिने अनौठो उपाय अपनाइन् । मेलवर्न विश्वविद्यालयकी विद्यार्थी हिदी लामो समयदेखि कुनै युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा […]
८ वर्षीय बालिकाको कमाई डेढ करोड !
Posted on: March 22, 2017Posted by: Tirtha Khanal
अमेरिकी एक ८ वर्षकी चार्लीले युट्युुबबाट मासिक १ लाख २८ हजार डलर कमाउने गर्छिन् । एन एज नामक साइटले हालै युट्युुब बाट सर्वाधिक कमाई गर्ने युट्युुब स्टारहरुको सूचि तयार गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने युट्युुब च्यानलहरुलाई दुुई भागमा विभाजन गरिएको छ : ब्यूूटी एण्ड स्टाइल र फूड एण्ड कुकिंग । त्यस अन्तरगत […]
चैत ७ । बेलायतमा ११ वर्षको नाबालिका गर्भवती भएपछि सबैभन्दा कम उमेरमा बच्चा पाउने बालिका हुने भएकी छन् । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकी उक्त नाबालिकाको लन्डन प्रहरीले नाम गोप्य राखेको ‘डेलीमेल’ अनलाइनले उल्लेख गरेको छ । डेली मेलकाअनुसार केहि हप्तामै ती नाबालिकाले बच्चालाई जन्म दिँदैछिन् । उक्त जन्मने शिशुको पिता पनि बालिकाभन्दा केहि वर्ष जेठो नाबालक […]
चिहानमा कक्षा !
चीनकी जिउ ताइजीले मृत्युलाई अगाल्न चाहने र मृत्यु नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने भावना राख्नेहरुलाई लक्षित गरी चिहानमा कक्षा सञ्चालनमा ल्याएकी छन् । सुन्दा पनि जति अनौठो लाग्छ यो कक्षा पनि उत्तिनै अनौठो छ । ताइजीले आफ्नो घर छेउको भिरालो जमिनमा मान्छे गाड्न नमिल्ने ६ वटा चिहान बनाएकी छन् । कुनै समय जागिर नपाएको […]
क्यानडाको धारामा आयो यस्तो पानी, रहस्य यस्तो छ
Posted on: March 12, 2017Posted by: Tirtha Khanal
सहरबासीका धाराहरुमा गुलाबी रंगको पानी आउन थालेपछि क्यानेडियाली सरकारले माफी माग्नु परेको छ । हाम्रो देशमा पानी नै नआउँदा तथा लेदो आउँदा समेत सरकारलाई मतलब हुँदैन । तर क्यानडाको एक सहरको प्रशासनले भने धारामा गुलाबी रंगको पानी आएपछि जनताहरुसँग माफी नै मागेको छ । क्यनडाको अल्बेर्टास्थित वनोवेका मानिसहरुले आफ्ना घरका धारामा गुलाबी रंगको पानी आएको […]
विश्वमै बढी तौल भएकी महिलाको सफल उपचार, १०० किलोग्राम तौल घट्यो
Posted on: March 11, 2017Posted by: Bishow Rimal
फागुन–२८ । विश्वकै सबैभन्दा बढी तौल भएकी इजिप्टकी महिला एमान अहमद अब्देल अटीको शल्यक्रिया सफल भएको छ । ३६ वर्षकी एमानको तौल नियन्त्रणको लागि अस्पतालको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिएको उपचारमा उनको १०० किलोग्राम तौल घटिसकेको छ । भारतको मुम्बईस्थित सैफी अस्पतालमा एमानको सफल ल्यापरोस्कोपिक स्लिभ ग्यास्ट्रेक्टोमी भएको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अहिले उनलाई […]
सहवास नगर्ने श्रीमानको लिंगको काम छैन भन्दै श्रीमतीले लिंग पारिन च्वाटै
Posted on: March 10, 2017Posted by: Tirtha Khanal
भारतको राजधानी दिल्लीबाट नजिकै रहेको उत्तरप्रदेशको गाजियाबाद जिल्लामा एक महिलाले रिसको झोँकमा आफ्नो लोग्नेको यौनांग काटिदिएकी छिन् । उक्त महिलाका अनुसार बिहे गरेको १० वर्ष भैसक्दा पनि उनको बच्चा भएन र त्यसैको रिसमा उनले लोग्नेको लिंगलाई बेकामे ठहर गर्दै उनको लिंग काटिदिएको बताएकी छन् । रिता नाम गरेकी ती ३० वर्षीया महिला बच्चा नजन्मिएपछि डिप्रेसनको […]
तालुचिन्डे प्रतियोगिता !
Posted on: March 9, 2017Posted by: Tirtha Khanal
जापानमा तालु चिन्डेहरूले मात्र खेल्न मिल्ने खेलले लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । जापानको सुरुता सहरमा प्रत्येक वर्षको फब्रुअरी २२ तारिखमा क्युवल प्रतियोगिताको आयोजना हुन्छ । यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीले आफ्नो टाउकाको बलले खेल जित्छन् । चिन्डो टाउकोमा सक्सन कप राखिन्छ । अर्को कप अर्को प्रतियोगीको तालुमा राखिएको हुन्छ । उक्त दुईवटा कपलाई डोरीले जोडेको […]
अनौठो रेष्टुरेन्ट, जहाँ निवस्त्र वेटरको जिउमा पस्किएको स्वादिष्ट खाना खान पाइन्छ
स्पेनमा एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट खुलेको छ, जहाँ जाने महिला तथा पुरुषहरुले त्यहाँका आफुलाई मनपर्ने पुरुष वा महिला वेटरको नांगो जिउमा पस्किएको खानेकुरा आफुपनि नांगै भएर खान सक्दछन् । दी इन्नेटो टेनेराइफ नामक रेष्टुरेन्टमा मुखै रसाउने भोजन गर्नुअघि पाहुनाहरु निर्वस्त्र हुन सक्दछन् र त्यहाँ उत्तेजक वातावरणको सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यहाँ छिर्नुअघि पाहुनाहरुले आफ्ना क्यामेरा तथा […]
एक महिलाले जन्माइन एक हप्ताको अन्तरमा तीन बच्चा
चीनमा एक महिलाले ७ दिनमा दुई छोरी र एक छोरालाई जन्म दिएकी छिन् । ती महिला २० वर्षकी चेंगलाई प्रसव पीडा सुरु भएसँगै उनले गत २१ फेब्रुअरीमा अस्पतालमा नर्मल डेलिभरीबाटै एउटा छोरा जन्माइन् । ३० हप्ताको गर्भपछि समय नै नपुगीकनै उनको बच्चा जन्मिएको थियो । छोरा जन्मिएसँगै महिलाको प्रसव पीडा रोकियो । तर उनको गर्भमा […]
संसारको एक मात्र भ्यागुत्ते अस्पताल सर्न धौधौ
फागुन – २० । अठार वर्ष पहिला स्थापना भइ स्थापनाकाल देखिनै भ्यागुताको उपचारमा निरन्तर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको अस्ट्रेलियाको एक मात्र भ्यागुते अस्पतालःद कायन्र्स फ्रग हस्पिटललाई मौजूदा भवनबाट सर्नका लागि धौधौ परेको छ । द कायन्र्स फ्रग हस्पिटल, आफ्नो अलग्गै पहिचान बोकेको विश्वभरीकै एक मात्र भ्यागुते अस्पताल पनि हो भनी परिचत छ । बिरालोले छाउरा […]
भित्री अंग देखिनेगरि टलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएपछि…
अमेरिकी शहर मियामीकी टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताले निप्पलसमेत देखिने खालको पारदर्शी पहिरन लगाएर टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएकी छिन् । २८ वर्षीया जेनी स्कोर्डामाग्लियाले मनोविज्ञानसम्बन्धी कार्यक्रम त्यस्तै हालतमा चलाएकी थिइन् । रिभिलिङ पहिरनमा उनले कार्यक्रम चलाएको कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा उनका फ्यानहरूले तारिफ गरिरहेका छन् । उनी पहिलोपटक टेलिभिजनको पर्दामा यसरी देखापरेकी भने होइनन् । उनी टेलिभिजनमा ‘नेकेड […]
अचम्मको बालक जन्मदै ८० वर्षको बुढो जस्तो
Posted on: March 3, 2017March 3, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बंगलादेशमा एकजना महिलाले अचम्मको बालकलाई जन्म दिएकी छिन् । ती बालक हेर्दा ८० बर्षका बुढा जस्ता देखिन्छन् । यस्तो किन भयो, किन यी बालक बुढाजस्ता देखिए भन्ने कुरामा सबै सोच्न बाध्य छन् । बच्चा बंगलादेशको मगुरा भन्ने स्थानमा जन्मिएको हो । उनको अनुहार पुरै चाउरी परेको र आँखा पनि ठूलो र रातो छ । बच्चाको […]
संसारकै सबैभन्दा सानो मोबाइल फोन (फोटो फिचर)
इमेजनबाट खरिद गर्न सकिने यो फोन संसारकै सबैभन्दा सानो मोबाइल फोन हो । किचेन साइजको यो फोनको नाम जे एठ बिट द बोस फोन दिइएको छ । यसको मूल्य करिब २८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । धातुबाट बनेको यस फोनले तीन तरिकाले काम गर्दछ । यसले ब्लूटूथ डायलर, ब्लूटूथ इयरफोन र मिनी इंडिपेडेन्ट सेलफोनको काम […]
गिनिज बुकमा नाम लेखाउन एक मिनेट ४२ पोटी लसुन
विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)मा आबद्ध दुई सय नौ देशको नाम ६१ सेकेन्डमा खररर्र वाचन गरी ‘गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड‘ मा नाम लेखाउन सफल कैलालीका भरत विष्टले अर्को अनौठो प्रतिभा देखाएका छन्। उनले एक मिनेटको समयभित्र नियमानुसार लसुनका ४२ पोटी खाएर देखाएका हुन्। एक पटकमा एउटा मात्र लसुनको पोटी खान पाइने लगायत नियम भए पनि […]
Posted on: February 27, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बंगलादेशमा एउटा यस्तो आदिवासी समुदाय छ जहाँ बाबुले आफ्नै छोरीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछन् । उक्त समुदायमा बाबुुछोरीको सहवासमा आमाको पनि सहमती र स्विकृति रहन्छ । यस्तो परम्परा बंगलादेशको मन्डी नामक आदिवासी जनजाति समुदायमा प्रचलनमा छ । यो समुदायमा पुरुषहरुले छोरी जन्मिएसँगै आफ्नै छोरीसँग बिहे गर्ने सपना देख्छन् । अनि छोरीको उमेर पुुगेसँगै इच्छा जागेमा […]
एक युवाको फेसबुक स्टाटसले २ हजार युवती डेटिङका लागि राजी !
Posted on: February 26, 2017February 26, 2017Posted by: Tirtha Khanal
भारतको गुजग्रामस्थित एक शकुल गुप्ता नामको युवाले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखे, जसको कारण हजारौं युवती उनीसँग डेटिङका लागि राजी भए । उनी गर्लफ्रेन्डविहिन युवा रहेछन् । तर, धनाड्य । उनले फेसबुकमा डेटिङ गर्न चाहने युवतीको निम्ति अफर दिए, ‘यदि मसँग कोहि डेट गर्न चाहन्छन् भने फाइभ स्टार होटलमा डिनर गराउनेछु ।’ यतिले मात्र युवती लोभिने […]
पृथ्वीमा ६ करोड वर्षभन्दा अघिदेखि नै पेन्गुइनको अस्तित्व
पृथ्वीमा ६ करोड १० लाख वर्ष अघिदेखि नै पेन्गुइन चराको अस्तित्व भेटिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । परापूर्वकालदेखि पृथ्वीमा विचरण गर्दै आएका सबभन्दा भीमकाय जनावर भनी विश्वास र दावी गरिँदै आएको डाइनासोरको उत्पत्ति शुरु भएको युगभन्दा पनि धेरै धेरै पहिलादेखि नै पेन्गुइन पक्षीको अस्तित्व शुरु भएको रहेछ भन्ने तथ्य न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्चमा मुख्यालय रहेको क्यान्टरब्युरि […]
साउदी राजकुमारकी सुन्दर श्रीमती जसले बुर्का छाडेर समाजसेवा गर्छिन्
Posted on: February 23, 2017Posted by: Tirtha Khanal
यी हुन साउदी अरबकी राजकुमारी हुन् अमीरा अमीरा अल तावील । नी अर्बपति राजकुमार अलवलीद बिन तलालकी पत्नी हुन् । जो ३२ बिलियन डलरका मालिक छन् । तलालकी उनी तेस्रो पत्नी हुन् । उनी, साउदी अरब जस्तो कठोर कानुन भएको देशमा छाडेर पश्चिमा फेसन गर्छिन् । उनी, खुलस्त सामाजिक अभियानमा सरिक हुन्छिन् । महिला हक–अधिकारका […]
लग्जरी कारभन्दा महंगो राँगो, मूल्य थाहा पाएर चकित पर्नुहुन्छ ! (भिडियाेसहित)
फागुन – ११ । के तपाईँलाई लग्जरी कार मर्सडिसभन्दा पनि महंगो राँगो हुन्छ भन्ने थाहा छ ? थाहा छैन भने चिन्ता नलिनुहोस्, भारतको कुरुक्षेत्रस्थित हरियाणामा यस्तो एउटा राँगो छ जसको मूल्य लग्जरी कारभन्दा पनि महंगो छ । युवराज नाम राखिएको उक्त राँगो भारतकै सबैभन्दा महंगो हो । कर्नालको एउटा सोमा यसको मूल्य लगभग ९ करोड […]
एक्लै बिबाह गर्ने एक युवतीको योजना, हनिमुन पनि एक्लै जाने
Posted on: February 22, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बिवाह गर्न दुई जना व्यक्ति अनिवार्य चाहिन्छ, होइन ? तर एक महिलाले जोडीबिनै बिहे गरेर यो मान्यतालाई ठाडो चुनौति दिन खोज्दै छिन् । बेलायतको साउथ योर्कसायरमा बस्ने ३९ वषिर्या लिन्ने गोल्लोग्ली ‘मिस्टर राइट’ को प्रतिक्षा गर्दागर्दा वाक्क भइन् । अब दाम्पत्य सम्वन्धप्रति उनको भरोसा टुटिसकेको छ । तर विवाहको इच्छा अझै मरेको छैन । त्यसैले […]
सयभन्दा बढी जोडी समलिङ्गी विवाह गर्नबाट वञ्चित
फागुन – १० । कानुनको अभावमा नेपालमा एक सयभन्दा धेरै जोडी समलिङ्गी विवाह गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । ‘निलहीरा’ समाज र परिवर्तशील समाजले आज विराटनगरमा अयोाजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा एक सयभन्दाम बढीसमलिङ्गी जोडी विवाहको प्रतिक्षामा रहेको निलहीरा सामाजका सञ्चार अधिकृत माधव दुलालले जानकारी दिए । उनकाअनुसार संस्थागत रुपमा जानकारी गराएर एक सय जोडी समलिङ्गीले विवाह गर्न […]
हिटलरले दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेको टेलीफोन २ लाख ५० हजार डलरमा लिलामी
Posted on: February 20, 2017Posted by: netra
फागुन – ९ । जर्मन नेता एडोल्फ हिटलरको टेलीफोन लिलामी भएको छ । अमेरिकामा भएको लिलामीमा उक्त टेलीफोनलाई एक अन्जान व्यक्तिले २ लाख ५० हजार डलर तिरेका हुन् । टेलीफोन खरिद गर्ने व्यक्तको नाम गोप्य राखिएको बिबिसीले जनाएको छ । लिलाम गर्ने मेरिल्याण्ड राज्यले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विध्वंसक हतियार भएको बताएको छ । रातो रंगको […]
सरकारले जनतालाई सुत्नकै लागि ३५ करोड खर्चिदैं
Posted on: February 20, 2017February 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
जापानमा सरकारले जनताको निद्राका लागि करोडौँ खर्च गर्दैछ । जापानमा मानिसहरु यति धेरै काम गर्छन् की उनीहरुसँग पर्याप्त निद्रा सुत्ने समय पनि हुँदैन । जापानीहरुको यहीँ पौरखले गर्दा जापान अहिलेपनि दुनियाको तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको छ । तर काममा अत्यधिक लम्पट हुने जापानीहरुको बानीका कारण पछिल्लो वर्षहरुमा जापानी जनताको स्वास्थ्य निकै नै बिग्रिरहेको जापान […]